तिथि मेरो पत्रु » उहाँले तपाईं खतरा मोल्ने छ? यी लक्षण लागि बाहिर देखो!
के तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ तर आफ्नो भावना पक्का छैनन् एक मान्छे छ? आफूलाई उहाँले केही काम गर्छ गर्दा अर्थ वा निश्चित व्यवहार के सोच फेला? आजसम्म तिनले साँच्चै तपाईं संग छेडखानी छ भने थाहा लागि बाहिर हेर्न आवश्यकता यी चिन्हहरू जो सोच्नुभएको?
तपाईं यी सबै प्रश्नहरूको सकारात्मक जवाफ भने, त्यसपछि शायद उहाँले तपाईंलाई मा साँच्चै छ भने तपाईं को माध्यम बढाउनु र पत्ता मदत गर्न केही सुझाव आवश्यकता.
उहाँले आँखा सम्पर्क पूरा गर्नुहुन्छ?
तपाईं कुरा गर्दै एक मान्छे समय को एक विस्तारित अवधि को लागि आँखा सम्पर्क कायम भने, त्यसपछि कि त्यो पनि तपाईं आकर्षित हुन्छ कि संकेत हुन सक्छ. तथापि, लजालु मान्छे पनि आँखा सम्पर्क पकड गर्न सक्छन्, छोटो समयावधिका लागि यद्यपि.
एक लाल थियो?
नता रूपमा लजालु मान्छे खारेज नगर्नुहोस्. तपाईं आसपास जब उहाँले blushes भने, त्यसपछि कुराकानी शुरू र उहाँले तपाईंलाई कुरा मर हुन सक्ने मान्छे मदत आफ्नो क्यू छ. तैपनि मान्छे को लागि लजालु गर्ने छैनन्, तपाईं आफ्नो चासो छ कि सूक्ष्म सङ्केत लागि निश्चित एक राम्रो संकेत छ शरमा.
मा ले आफ्नो स्नायु हुनुहुन्छ?
कि मान्छे सधैं तपाईं वरिपरि जब बेचैन देखिन्छ किन आजसम्म सोच्नुभएको? खैर, उहाँले छोड्न चाहनुहुन्छ किनभने यो सधैं नहुन सक्छ. उहाँले तपाईंलाई कुरा गर्न साहस सारांशमा भन्नुपर्दा खोज्छ रूपमा ती लेने बस आफ्नो स्नायु हो.
आफ्नो दंग छन्?
तापनि तपाईं कुरा गर्दा तपाईं मा रुचि मा आफ्नो आँखा लुकाउन प्रयास सक्छ कि एक मान्छे, उहाँले विस्तृत आँखाले आफ्नो दंग उठ्छ भने, त्यसपछि कि त्यो तपाईं संग छेडखानी छ कि चिन्ह हो.
ऊ एक copycat हुनुको?
यो एक धेरै रोचक तथ्य छ. उहाँले तपाईंलाई संग छेडखानी छ भने, उहाँले अनजाने के गर्दै छन् प्रतिलिपि हुनेछ. तपाईं याद छ कि तपाईं आफ्नो कपाल को माध्यम ले आफ्नो हात कदम जब, आफ्नो हात पनि आफ्नो कपाल उत्प्रेरित गर्छ? अथवा पनि तपाईं आफ्नो खुट्टा बदलाव जब, उहाँले पनि गर्दछ? यो प्रेमलीला को जादू छ र यी तपाईं को लागि बाहिर हेर्न आवश्यक संकेत केही हो.
उहाँले आफ्नो टाउको को झुकाव गर्छ?
के तपाईं कहिल्यै तपाईं उहाँलाई कुरा रूपमा तपाईं तिर आफ्नो टाउको झुकाव कि मान्छे देखेको छ? यो साँच्चै उहाँले अर्थ तपाईं रुचि र ध्यान हुनु हो, केहि मा सम्झना छैन ताकि तपाईं भनिरहेका छन्.
उसको खेल एक मुस्कान छ?
तपाईं मा रुचि छ कि एक मान्छे उहाँले तपाईंलाई कुरा गर्न चाहन्छन् कि एक चिन्हको रूपमा तपाईं मा मुस्कान हुनेछ. त्यसैले, एक एक कुराकानी सुरु गर्न आमन्त्रण रूपमा ले.
उहाँले akimbo खडा गर्छ?
तपाईं आकर्षित हुन्छ एक मान्छे जो तिनीहरूले आत्म-आश्वासन कम्मर मा राखिएको हातले उभिएर हो तपाईं देखाउन प्रयास गर्नेछ, वा औंठी आफ्नो बेल्ट को loops राखिन्छ. यो चिन्ह स्पष्ट हुन सक्छ, तर यो एक पुस्तिका रूपमा काम गर्न सक्छन्.
खोलेका आफ्नो विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ?
के तपाईं कुनै चाहनुहुन्छ भने यो कुरा थाह थियो, आफ्नो विद्यार्थीहरु विस्तार र यदि तिमी के छैन, तिनीहरूले करार? यस कुरालाई मनमा राख्दै, तपाईं के गर्न आवश्यक सबै तपाईंले कुराकानी छ रूपमा आफ्नो आँखा हेर्न छ. तिनीहरूले विस्तार भने, त्यसपछि उसले चासो छ थाहा.
उनी छुन गरे?
मान्छे कहिल्यै तपाईं एक नरम स्पर्श दिनुभएको छ, उहाँले देख्नासाथ जस्तै? त्यसपछि त्यो निश्चित रूप तपाईं मा रुचि छ र आफ्नो ध्यान कब्जा गर्न चाहन्छ. तथापि, भएकाहरूलाई ढोंगी लागि बाहिर घडी, राम्रो, बस सम्बन्धमा खेलो गर्न चाहने ढोंगी. तपाईं म के मतलब थाहा, तपाईं छैन?
तपाईं अब संकेत बुझ्न भएकोले तुरन्त उहाँले तपाईंलाई संग छेडखानी छ भने थाहा लागि बाहिर हेर्न, यो सिङ गरेर साँढे लिन समय छ. मौका द्वारा तपाईं पारित नदेऊ!